Mmeputara nke Roses china n'ụlọ ma lekọta: foto nke ime ụlọ, esi akụ mkpụrụ, nke mkpụrụ na-ewe ma gbanye osisi ahụ n'ime mmiri ma ọ bụ n'ala? - Ụlọ, ụlọ - 2020
Chinese rose: mmeputakwa n'ụlọ. Gịnị ma ọ bụrụ na osisi anaghị adị ndụ?
Onye China, ma ọ bụ nke ndị China hibiscus, bụ osisi na-adịghị adị na ya, nwere ike iru mita atọ. Okpueze bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, okooko osisi ndị buru ibu, ruo 16 cm n'ịdị elu. Ekele diri ndi oru ugbo, ihe di iche iche di iche iche osisi. Ufodu di iche iche nwere ike inwe akwukwo ocha, ude ma o bu uhie uhie na akwukwo ndu ndu.
Ọ na-adọrọ mmasị na mgbọrọgwụ, ọ dịkwa mfe ịmụta nwa n'ụlọ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na osisi anaghị adị ndụ? Ka anyị tụlee ihe nzuzo nke mmepụta nke osisi na ụzọ dị iche iche na ilekọta hibiscus ime ụlọ.
Kedu ka a si gbasa mkpụrụ?
Ịcha: esi agbacha mkpụrụ osisi ahụ?
Ọ ga-ekwe omume ịkụ ihe ịse na mbara ala?
Gịnị ma ọ bụrụ na osisi anaghị adị ndụ?
Kedu oge nke afọ ka a ga-agbasa ụlọ hibiscus ime ụlọ?
Ọ bụrụ na mkpụrụ ahụ na-agbasa mkpụrụ, ọ ka mma ịgha ha na February-March. Mgbatị site na cuttings nwere ike ịbụ afọ, ma ihe kacha mma na Jenụwarị na February.
Ọzọkwa ọ ga-ekwe omume ịhụ foto nke ụlọ hibiscus.
A na-ahọrọ ite maka hibiscus ụrọ ma ọ bụ plastik nke nwere ihe dị ka 9 cm, ọkacha mma ìhè, dị ka mgbọrọgwụ n'ime ikpuchi mmiri. Ị nwere ike ịhọrọ ite na onye na-akwa ákwà, ọ bụrụ na ị na-egbu oge ịgbara mmiri ruo awa ole na ole, mgbe ahụ, pan na mmiri a gbakọbara ga-azọpụta osisi ahụ site na ihichapụ. Tupu e kpoo ite ahụ, a ga-asa ya na ncha ma sachaa ya na mmiri mmiri.
Ala maka ndị China, ị nwere ike ịzụta njikere, ma ọ bụ ịkwadebe ala n'onwe ya, maka nke a, ị ga-achọ ịma ngwakọta nke ị ga-eme. A na-eji nkwadebe ala:
2 akụkụ nke ala turf;
1 akụkụ ala na-emebisị;
1 akụkụ biohumus ma ọ bụ humus;
1 akụkụ nke ájá ájá.
Ngwakọta dị otú ahụ na-adabara ma nke mbụ osisi nke osisi, na kwa afọ transplantation. Ọgụgụ ọrịa adịghị mma, n'ihi ya, ị nwere ike ịdaba n'ụkpụrụ nke ala, na-agbanwe ya. Dị ka ihe atụ, tinye obere peat, vermiculite.
Ọ dị mkpa! Ala maka Hibiscus kwesịrị ịdị na-edozi ahụ, dị ọcha, acidity kwesịrị ịnọ nso na-anọpụ iche.
Na-eto eto nke Chinese si na nkpuru bu ihe na-akpali akpali, ma na-efu ezigbo mkpụrụ osisi. Enwere ike ịkpọ usoro a abụghị ịzụlite, ma họrọ, ebe ọ bụ na a pụghị inweta osisi ahụ n'onwe ya site na osisi.
A pụrụ ịzụta mkpụrụ, ma ị nwere ike ịnakọta onwe gị:
Mgbagwoju anya. Site n'ehihie, mgbe anthers na-emeghe na stamens, a ghaghị imetọ pistils na pollen na-enwu gbaa.
Ifuru na-agwụ ma na-apụ n'anya, mana egbula ya n'ike.
Mgbe mmetọ nke ọma gasịrị, igbe dị na sepals amalite itolite ma nọgide na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mkpụrụ chara n'onwe ya ihe dịka ọnwa abụọ, mgbe igbe ahụ na-agbanwe edo edo, a na-etinye okpu gauze, nke "na-ejide" mkpụrụ dara ada.
Mkpụrụ osisi na-emebisiri ike ruo afọ isii.
Usoro ntughari mkpụrụ:
Tupu ịgha mkpụrụ, a na-edebe mkpuru osisi ahụ maka ọkara otu awa na ngwakọta pink nke potassium permanganate, saa ya nke ọma, ma tinye ya maka otu ụbọchị na uto na-akpali akpali. Liquid kwesịrị ikpuchi obere osisi ka embrayo ghara ịnwụ n'ihi enweghị oxygen.
A na-atụ anya mkpụrụ osisi na gauze na mmiri ọkụ, ebe mbụ a ga-atụ anya ya na ụbọchị atọ.
Mgbe ahụ, ha na-anọdụ ala na ite ma ọ bụ iko plastik na ala, na-efesa ya n'ụzọ doro anya na ụwa ma kpuchie ya.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ịlee vidio maka mmepụta nke hibiscus osisi:
Maka mgbasa nke Roses nke Roses site na ịcha, ị nwere ike iji ihe fọdụrụnụ mgbe ị bechasị bushes. Kedu otu esi ewere scion? A na-eto eto, nke na-adịghị aka ike nke 8-12 cm n'ogologo, na ọ dịkarịa ala atọ internodes, ọkacha mma ịkpụ na Jenụwarị-February. Enwere okpukpu abụọ - na mmiri ma n'ime ala.
Ntuziaka maka ịgha mkpụrụ osisi Roses na mmiri:
A na-ejupụta mmiri ahụ, ọkacha mma nke iko gbara ọchịchịrị.
Na ya tinye stalk.
Site n'elu, iji mee ka iru mmiri dịkwuo elu, a na-ekpuchi ya na okpu, ite ma ọ bụ iko plastik.
Cuttings na-ewe mgbọrọgwụ n'otu ọnwa.
Mgbe ọdịdị nke mgbọrọgwụ ahụ pụta, a na-atụgharị osisi ahụ n'ime ala.
Nyere! Maka osisi na-eto eto ọ bara ezigbo uru ịgbakwunye akpa akpa na ala.
Ntuziaka maka ịgha mkpụrụ Roses na ngwa ngwa n'ala:
Mgbe akwukwo ahihia wepu okara.
Na-akwadebe ite na olu nke 0,5 lita - washes na mmiri sie.
Tupu akuku, a na-eji mmiri esi mmiri wụsa ala.
N'elu ala mmiri ahụ, a na-ejupụta ite ahụ, mmiri na ala ume.
Egbubilata nke 1.5-2 cm na ala ájá.
N'elu ya, a na-ekpuchi ya ma ọ bụ ihe ngwugwu (a na-emepụta ebe a na-etinye obere ụlọ griin).
Akpokoro nke osisi na-etinye n'ime ebe na-egbukepụ egbukepụ nke nwere ogo 23-25, ma ọ bụghị n'okpuru ìhè anyanwụ kpọmkwem, ma ọ bụghị ebe a na-akwaga ebe.
Na ọdịdị nke condensate - airing.
Mbelata ahụ malitere ịmalite - mmụba na oge ikuku ventilata, ma ọ bụrụ na hibiscus adịghị ewetu epupụta - iwepu griin ha.
Mmeputakwa nke Hibiscus cuttings na-ejigide àgwà dị iche iche, osisi ahụ na-agbapụtakwa n'afọ mbụ.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ịlee vidiyo banyere Hibiscus ọnwụ:
Ọ bụ ndị China bụ osisi na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-adịghị mma maka ihu igwe anyị.. Ewezuga ogige Hibiscus, a na-emegharị maka okpomọkụ ruo ogo 30. A na-ahọrọ ebe maka osisi a ma chebe ya pụọ ​​na ifufe. Ala kwesiri ighota na ihe siri ike, mmiri kwesiri ibata n'ime miri.
A na-arụ ọrụ na mmiri mgbe ala na-eme nke ọma. Nkwadebe nke olulu:
Oghere maka akuku kwesịrị okpukpu abụọ dị ka usoro mgbọrọgwụ hibiscus.
Oghere drainage oyi akwa 15 cm site na brick agbajiri na-eme n'ime.
Ihe nkedo ọzọ bu 10 cm nke oma site na aja.
Akwukwo oyi akwa 15 cm.
Nkịtị ikpeazụ bụ aja, 15 cm miri emi.
Ejikọtara ala ala na-akụ.:
2 ala ala si na olulu;
4 iberibe peat;
1 akụkụ ájá.
A na-etinye sapling n'ime olulu dị njikere, nke mere na a na-ekpuchi olu n'olu, ma jupụta n'ala dị njikere.
A na-agba mmiri ahụ ọkụ, fesa ya ma jiri nwayọọ kpuchie ala. Ọchịchị isi na-elekọta Hibiscus - na-agbanyekarị mmiri na ịtọpụ ala. Ná mmalite oge ọkọchị, mgbe mkpanaka ọhụrụ pụtara, ọ dị mkpa iji bepụ ochie ma mee ka ị ghọọ ya. Ọ bụrụ na a na-akụ ihe n'oge a na-eto eto, mgbe ahụ, a ghaghị ịzado hibiscus na uwe elu dị elu nke nitrogen na phosphorus, ma ọ bụrụ na ọdịda, na-eme nri na potash. N'ime oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ, a na-agba mmiri China kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na osisi anaghị adị ndụ, mgbe ahụ:
Enwere otutu udu ma obu chlorine n'ime mmiri maka ogbugba mmiri. Ọ dị mkpa ka obụpịa ma chebe.
A na-efunahụ ọrịa aṅụ site na drafts, hypothermia, ma ọ bụ nnukwu mmiri.
Osisi ahụ kpọnwụrụ - ihe kpatara ya nwere ike ịbụ obere mmiri.
Ọ bụrụ na ndị China na-adaba na mmiri kwesịrị ekwesị, nke a nwere ike ịbụ mmeghachi omume maka mgbanwe nke ọnọdụ. A ghaghị inye osisi ahụ oge iji weghachi.
Ndị buds na-apụta, nke daa ma ghara imeghe - ala kpochapụrụ site na mmiri na-ezighi ezi, osisi ahụ enweghị nri, ma ọ bụ okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị ala.
Ọ bụrụ na ala ala daa, ndị ọhụrụ ahụ na-eto eto, ihe kpatara ya bụ na e nwere ọtụtụ calcium na chlorine n'ala, ma ọ bụghị ezuru ígwè na nitrogen, ikuku ikuku na ogbugba mmiri na mmiri oyi.
Akwụkwọ nwere oghere pinkish, ọ bụghị ụdị dịgasị iche iche - osisi ahụ enweghị ìhè zuru ezu ma ọ bụ nkwụsị nke nri.
Ndi China bu uzo nke osisi, ma na-elezi anya site na mkpuru osisi ma o bu osisi, osisi ohia mara mma, nke ga-enwe obi uto ruo otutu afo ma ghọọ ezigbo ihe ngosiputa maka ulo.
Atụmatụ nke ndọkọ kpalakwukwu
Onye na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi na Satumba 2019
Ihe nile banyere ojiji nke rosemary, ọgwụ ọgwụ na contraindications nke osisi
Okpokoro ọkụ na-ahụ n'anya nke na-egbuke egbuke - Podbelskaya ọkwa
Datura - osisi mara mma, na-egbu egbu na ọgwụ
Otu esi echebara hydrangea anya, ndụmọdụ bara uru
Ceropegia Wood - nlekọta ụlọ
Lavender - Nkụ na Mpụga
Ose "Soloist": àgwà na nkọwa nke ụdị dị iche iche
Badan: onye ama ama ama na ala
Mgbaghara ụlọnga: nnwere onwe pụọ na nje na balloon na ọnụahịa kacha mma